Maraykanka, 01 March 2016
Talaado 1 March 2016
Mareykanka: Garoosre Go'aan Ka Gaaray Qaxootiga Syria
Garsoore federaalka Mareykanka ah ayaa sheegtay in gobolka bartamaha woqooyi ee Indiana uusan joojin karin dib u dejinta qaxootiga Suuriyaanka.
Mareykanka: 11 Gobol oo ay Doorasho ka Dhaceyso.
Talaada maanta ah oo loo yaqaan "Super Tuesday" waa maalinta ugu muhiimsan tartanka madaxtinimada Mareykanka.
Booliiska gobolka Indiana ayaa sheegay inay rumeysan yihiin in dilka dadkan uusan sabab u ahayn diintooda ama halka ay ka yimaadeen.
H. Clinton oo ku Adkaatay Doorashadii S. Carolina
Tartamaha xisbiga Dimoqraadiga ee madaxtinimada Maraykanka, Hillary Clinton ayaa si weyn uga guuleysatay ninkii ay baratamayeen ee Bernie Sanders, doorashadii gobolka koonfurta Maraykanka ku yaalla ee South Carolina
Sheekh Xasan Jaamici oo ah imamka masjidu-dacwah ee magaalada Saint Paul ee Minnesota ayaa sheegay in hay’adaha amniga ay u diideen inuu ka mid noqdo culumo la qorsheeyey inay booqdaan garoonka diyaaradaha Minneapolis.
Obama oo Rajo ka Qaba Xabbad Joojinta Syria
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa si taxaddar leh uga hadlay in xabbad joojinta dagaalka Syria ay horseeddo wada hadallo nabadeed oo soo af-jara dagaalka sokeeye ee muddada shanta sano kasocday dalkaasi.
USA: Mudanayaal Taageeray Sharci ay Ansixisay Soomaaliya
Mudanayaal ka tirsan Congress-ka Maraykanka ayaa soo dhoweeyey ansixinta ay Soomaaliya ee Sharciga ka Hortagga Lacag is-daba mairnta iyo Maalgalinta Aragagixisada
Donald Trump oo ku Guuleystay Doorashadii Nevada
Natiijooyinkii ugu dambeeyey ee doorashada ayaa muujinaya in Trump uu helay 46% codadka.
Xiisadda ayaa waxaa xudun u ah kulan uu Brett McGurk oo ah ergeyga gaarka ah ee Obama u qaabilsan Syria uu la yeeshay kooxda Kurdish-ka ee PYD,
Hilary Clinton ayaa ku guuleystay doorashada dimoqraadiga ee gobolka Nevada iyadoo ka adkaatay Senator Bernie Sanders. Dhinaca kale, Donald Trump ayaa isna ku guuleystay doorashadii South Caroline, halka Jeb Bush uu ka haray tartanka.
Kerry: Ruushku wax Haka Baddelo Duqeynta Syria
Xoghayaha Arr. Dibedda Maraykanka John Kerry ayaa Ruuska ku eedeeyay inay duqeynayaan kooxaha mucaaradka ah ee sharciga ah ee dalka Sriya iyo waliba dad rayid ah.